Izicelo zokonga ibhethri ku-smartphone yakho | Izindaba zamagajethi
Izinhlelo zokusebenza ezi-5 zokonga impilo yebhethri kwi-smartphone yakho ye-Android
Gcina ibhethri ku-smartphone yethu Yinto cishe bonke abasebenzisi okufanele bayikhumbule cishe nsuku zonke, ikakhulukazi uma, ngokwesibonelo, sisuka ekhaya kuqala ekuseni futhi singabuyi kuze kube ntambama noma ebusuku. Ngenhlanhla, amadivayisi eselula aya ngokuya ephatha ibhethri lawo kangcono futhi asivumela ukuthi sikwazi ukuzimela ngokwengeziwe, kepha awakafiki ezingeni lokuthi singakhohlwa ukuthi sishiye kangakanani ibhethri.
Esikhathini esithile esedlule sikunikeze Amathiphu ayi-10 athakazelisayo okusindisa impilo yebhethri ku-smartphone yakho Futhi namhlanje sithathe isinqumo sokubuyela emthwalweni okukhombisa izinhlelo ezi-5 zokonga impilo yebhethri kudivayisi yakho yeselula, cishe ongazi ngayo futhi ezosiza kakhulu empilweni yakho yansuku zonke. Vele sikushiyele isixhumanisi sokulanda sazo zonke izinhlelo zokusebenza, ukuze ukwazi ukusifaka njengamanje kudivayisi yakho yeselula.
Ngaphambi kokuqala ukubuyekezwa kwalezi zinhlelo zokusebenza esifuna ukukubonisa zona namuhla, kufanele sikutshele ukuthi imiphumela mihle, kepha ukuthi akekho umuntu olindele ukuthi benze ibhethri lihlale izinsuku ezintathu esikhundleni selilodwa njengoba lihlala njalo, noma ezinye izinto ezimangazayo . Yizinhlelo ezisizayo, kwesinye isikhathi eziningi, kepha lokho ngeke kwandise umthamo webhethri lethu.
1 Isilondolozi Sebhethri le-DU
2 Isivikeli sebhethri
5 I-Snapdragon Battery Guru
Isilondolozi Sebhethri le-DU
Ukuqala ngalolu hlu sizokukhombisa olunye lwezinhlelo zokusebenza ezilandwe kakhulu ku-Google Play, ezihlobene nesihloko esisikhathazayo namuhla, futhi esiseduze kakhulu ukufinyelela izilinganiso eziyizigidi ezinhlanu ngezinkanyezi ezinhlanu. Lesi akusona isivivinyo esinamandla, kepha ezimweni eziningi kuthatha ukuthi sibhekene nohlelo oluhle kakhulu, oluhambisana nalokho elikunikezayo. Akunasidingo sokusho, ukuba kulolu hlu, singakuqinisekisa lokho Isilondolozi se-Du Battery Isinikeza izici ezithile ezithokozisayo futhi kufanele kube ulayini wasendlini kudivayisi yakho.
Uhlobo lwamahhala lolu hlelo lokusebenza lusinikeza ukwenza ngokugcwele idivayisi yethu ngohlelo lokusebenza lwe-Android futhi nokuba nethuba lokukhetha izindlela ezahlukahlukene zokonga, ukwazi nokwenza imodi yethu yokonga, ngokugcizelela okukhethekile emininingwaneni esithandayo.
Isilondolozi se-DU Battery - ukonga ibhethri nokwenza ngcono
Umthuthukisi: I-DU APPS STUDIO - I-BATterY & BOOSTER
Isivikeli sebhethri Kwenzeka ukuthi kube ngesinye sezicelo ezilula ozibonile, kepha isisho sithi kwesinye isikhathi okulula kakhulu kusebenza kakhulu. Ngenxa yalolu hlelo lokusebenza sizokwazi ukwenza izinto eziyisisekelo kodwa ezisebenzisekayo njengokusebenzisa ngokuzenzakalela noma ukwenza i-WiFi isebenze, ukuvimbela ukuxhumana lapho silele nokulawula ezinye izinqubo eziningi eziwusizo kakhulu.
Mhlawumbe ukonga ibhethri akukuhle, kepha cishe uzokuqaphela ekupheleni kosuku uma usebenzisa iBaterry Denfeder.
Ngaphezu kwalokho, futhi ukuze ungaqali ukubeka izinkinga ngalolu hlelo lokusebenza, ingalandwa mahhala esitolo esisemthethweni se-Google noma ukuthi iyiphi i-Google Play efanayo. Ngezansi unokuxhumanisa okuqondile ukulanda khona manje ku-Smartphone yakho.
Londoloza ibhethri Defender-battery
Umthuthukisi: INFOLIFE LLC
Lolu hlelo lokusebenza lungenye yezigaba ezinhle maqondana nokonga ibhetri nokwenza kahle njengoba livele esitolo esisemthethweni sohlelo lokusebenza nge-Android KitKat. Ngaleso sikhathi ibingasetshenziswa kuphela kumadivayisi anokufinyelela kwezimpande, kepha namuhla Greenify ingabuyekezwa kunoma yiluphi uhlobo lwedivayisi.
Ukusebenza kwalolu hlelo lokusebenza kusekelwe ku- thola izinqubo ezingadingekile ngaphakathi kwe-smartphone noma ithebhulethi yethu, bese uzishiya zisesimweni sokulala ubusika bonke. Lokhu kusho ukuthi lezi zinqubo azizisebenzisi izinsiza nebhethri ngokungadingekile uze uphinde uzisebenzise.
Ezimweni eziningi, ukusetshenziswa kwalolu hlelo lokusebenza kubangela ukuthi izinqubo ezisebenza ngemuva zisebenzise izinsizakusebenza ezimbalwa nebhethri. Vele, inkinga ukuthi ezinye zezinhlelo zokusebenza ezihlala ngemuva ngeke zisebenze kahle ngoba azikwazi ukuvuselelwa. Uma ufuna ukuqhubeka nokusebenzisa, isibonelo, izinhlelo zokusebenza zemiyalezo esheshayo ngendlela eyejwayelekile noma ejwayelekile, lolu hlelo akulona olwakho.
Umthuthukisi: I-Oasis Feng
JusiceDefender kungenye yezinhlelo zokusebenza zakudala kakhulu zalolu hlobo, ezisetshenziswa ngamashumi ezinkulungwane zabantu nsuku zonke ukonga impilo yebhethri kudivayisi yabo ephathekayo noma kuthebulethi. Njengoba ezinye izinhlelo zalolu hlobo zikuvumela ngaso sonke isikhathi lawula ukuxhumana okuhlukile kwedivayisi yakho noma yakha amaphrofayli ahlukene okonga ibhethri.
Okwamanje inikezwa ku-Google Play ngezinguqulo ezihlukene ezintathu, enye yazo imahhala kanti ezinye ezimbili zikhokhelwe. Isincomo sethu ukuthi uzame uhlelo lokulanda lwamahhala futhi uma likukholisa noma uluthola luyinsiza yangempela, bhala iphakethe lakho bese usebenzisa i-euro eyinqaba enguqulweni ye-Plus noma ye-Ultimate.
JuiceDefender - isilondolozi sebhethri
I-Snapdragon Battery Guru
Isicelo esizokukhombisa sona ngokulandelayo, sabhapathizwa ngegama le- I-Snapdragon Battery GuruNjengoba ungacabanga, kuhloselwe kuphela lawo madivayisi eselula afaka iprosesa elenziwe yiQualcomm, okwamanje okumbalwa emakethe.
Lapho ifakwa ku-terminal yakho, kuzobukeka sengathi lolu hlelo lokusebenza alwenzi lutho, kepha singasho ukuthi lusebenza ngokuthula kakhulu futhi ngaphandle kokubanga umsindo omningi. Futhi ukuthi okokuqala kuzoqoqa imininingwane ngakho konke esikwenzayo nge-smartphone yethu, bese kwenziwa kungasebenzi zonke izinhlelo ongazisebenzisi.
Ngaphezu kwalokho, ebusuku izonakekela hhayi kuphela ukushiya izinhlelo ezihlukile zingasebenzi, kepha izocisha nezimpawu ezingenantambo, okusobala ukuthi ngeke sizisebenzise uma silele.
Njengesincomo, ungazami ukuyifaka uma ungenayo idivayisi eneprosesa yeQualcomm njengoba uhlelo lokusebenza luzosebenziseka ngokuphelele Futhi okuwukuphela kwento elizoyenza ukuthatha indawo yokugcina ku-smartphone noma kuthebhulethi yakho.
I-BatteryGuru ye-Snapdragon ™
Umthuthukisi: Okuhlangenwe nakho kwe-Qualcomm Connected, Inc.
Usukulungele ukuqala ukonga impilo yebhethri ngalezi zinhlelo zokusebenza ezinhle?. Ungasinika umbono wakho esikhaleni esibekelwe ukuphawula kulokhu okuthunyelwe noma ngokusebenzisa amanethiwekhi omphakathi, lapho sethemba nokuthi ungasitshela ngezinye izinhlelo zalolu hlobo ozisebenzisa osukwini lwakho nosuku ukonga nokuphatha ukuzimela kwe ibhethri ledivayisi yakho ephathekayo enesistimu yokusebenza ye-Android.
Indlela ephelele ye-athikili: Izindaba zamagajethi » I-Telephony » AmaSelula » Izinhlelo zokusebenza ezi-5 zokonga impilo yebhethri kwi-smartphone yakho ye-Android
Konke esinakho ku-E3 2016 kuze kube manje
I-PS4 Neo, ikhonsoli entsha yomdlalo weSony esizoyibona ku-E3 2016 elandelayo